Nhau - Six Hot International Hotera Maitiro akurukurwa
masimba matanhatu ane simba aive achitsanangudza ramangwana rekugamuchira vaeni nekufamba
Tourism inoda kupa kuhupenyu hwehupenyu hwevagari. Munzvimbo dzakakwirira-kudiwa pane panofanirwa kuve nesangano rakananga kunononoka, kusingaperi kusanganisa kukura kunoenderana nekuremekedza vagari. Geerte Udo, CEO weAmsterdam & vadyidzani uye muvambi weiyo iamsterdam mushandirapamwe, akaudza vateereri vevashandi vanopfuura zana vekugamuchira vaeni kuti mweya weguta waive mushandirapamwe une simba pakati pevagari, vashanyi nemakambani. Nekudaro, hunhu hwehupenyu hwevagari hunofanirwa kuve hwekutanga pekutanga. "Hakuna mugari anoda kumuka kune vashanyi vanovapakira pasuo ravo."
Panzvimbo pekuyedza kuzviita zvese ivo vega, varidzi vemahotera vanofanirwa kushanda pamwe nehunyanzvi vadyidzani vane hunyanzvi. "Vabatsiri vakawanda uye havana njodzi pane kuzviita iwe pachako," akadaro James Lemon, CEO weThe Growth Works. Akaudza vateereri kuti makambani madiki akasimba anokwanisa kubatsira makuru kugadzirisa matatu ekutanga: epfupi-nguva yekutengesa zvinodiwa (zvakakosha seCovid-19 inodzvinyirira inoda); kugadzikana kuburikidza nenzira dzekugadzira dzekudzokorora, kudzikisira uye kushandisa zvakare; uye kubatsira kugovera - nekurumbidza nzira dzakananga uye dzisina kunangana dzekuvhara mipata yekuda senge pakati pevhiki zororo mabhaisikopo. "Inguva yemikana isingaenzaniswi," akadaro.
Gamuchira Hupfumi Hwehutano
Michael Ros, CEO uye mubatsiri-weboka weBidroom online yekufambisa nharaunda akataura kuti huwandu hwenhengo uye kunyoreswa kune vanhu kuri kukura. (MuHolland iri gumi pamunhu mu2020, zvichienzaniswa neshanu mu2018). Uchishandisa iyo Spotify, Netflix uye Bidroom modhi, iyo nyowani yehupfumi hupfumi inoisa simbiso pakuwana, kwete kuve muridzi, kubhadhara kudzoreredza, kwete kukuru kubviswa, hukama, kwete mashandisirwo, kushambadzira kwepamberi uye kudyidzana, uye kwete kuyedza kuzviita zvese iwe pachako.
Taura nemoyo, kwete musoro, akadaro Matthijs Kooijman, Commerce Director kuAkanamatira mutauro ungwaru. Kana mahotera achida kunyatsobatana nemisika inotarisirwa, vanofanirwa kutarisa kushandurwa kwemitauro uye kwenzvimbo yezvirimo. Inofanirwa kuonekwa sekudyara, kwete mutengo. Shanduro ine hunyanzvi nevatauri vemuno inotungamira mukushandurwa kuri nani mwero, kushambadzira kweshoko, mhinduro dzakanaka, uye kusimudzira midhiya yenhau. Kana iwe ukataura mumutauro uyo anogamuchira anonzwisisa, zvinoenda kumusoro wavo. Asi taura navo nemutauro wavo, zvinoenda pamoyo pavo. Mukufamba uye nezvimwe zvakawanda, moyo unotonga musoro.
Zvino Kwete Gare gare
Mahotera nevanozvigovera vanofanirwa kuve nekukwanisa kusimbisa mabhenefiti nekukasira kune vatengi, akadaro Bas Lemmens, Mutungamiri weHotelplanner.com. Akaudza I Meet Hotel vanopinda kuti vatengi vanosarudza nzvimbo dzekubhuka muhotera dzine dzakasiyana siyana mahotera, imwe-yekumira shopu. Vatengesi vehotera havafanirwe kuedza kuvaka software. Haisi kugona kwavo. “Rezinesi!” akati.
Greens Haifanire Kugumbuka
Sustainability mukana wemakwikwi, asi unotambura nedambudziko rekumaka. “Hazvifanirwe kunge zviri zvekusvibira uye kugumbuka. Inofanirwa kuve yakasvibira uye yakanaka, "akadaro Martine Kveim, mubatanidzwa weCHOOSE, chikuva chevatengi chekudzora kusvibiswa kwemweya mukufamba. Dare revashandi vezvekushanya vanogadzikana pachiitiko ichi vakati zvinhu zvikuru zvinotevera mukuchengetedza zvichave nyama shoma, kuzvipira kuderedzwa chikafu chekudya, uye danho rekudzima mapurasitiki anoshandiswa kamwechete. Kuchave nezvakawandisa zvishandiso kuyera kabhoni kuburitswa kunoenderana nembatya, chikafu, kuvaka - zvese zvine chekuita nekugamuchira vaeni. Mhedzisiro mhedzisiro inozopedzisira yave yekuti isu tinobva kune kabhoni kusarerekera kune mamiriro ekunze ekushanya - uko kwako zororo kabhoni kuburitswa kunopfuura kukanganiswa nezvirongwa zvegreen verification.